Dihy mahazatra any amin'ny faritra Karaiba: Manomboka amin'ny salsa ka hatrany amin'ny bachata | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 05/05/2021 12:08 | America, kolontsaina
Ny dihy mahazatra any amin'ny faritra Karaiba dia niainga tamin'ny lasa. Antsoinay izany ho faritany midadasika izay misy firenena maro fandroana Ranomasina Karaiba ary koa ireo nosy izay voahodidin'ity faritra amin'ny Oseana Atlantika ity. Anisan'ireo voalohany ny México, Kolombia, Nicaragua o Panama, raha ny momba ity farany ity dia azontsika atao ny manonona ireo firenena ho Kiobà (raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba amam-panao ity firenena ity ianao, tsindrio eto), Repoblika Dominikana o Jamaika.
Noho izany, ny dihy mahazatra any amin'ny faritr'i Karaiba dia ireo izay zatra amin'izany faritany midadasika izany. Amin'izao fotoana izao, izy ireo dia vokatry ny fampifangaroana fitaomana telo: ny teratany, ny espaniola ary ny afrikanina, ity farany izay naterin'ireo izay nanandevozana azy ireo ho any. Raha ny marina, maro amin'ireo dihy ireo no natao tamin'ny fiafaran'ny andro niasan'ny andevo sy ny mpiasa afaka. Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, holazainay aminao ireo gadona ireo.
1 Dihy mahazatra any amin'ny faritr'i Karaiba: karazany maro be
1.1 Salsa, dihy Karaiba quintessential
1.2 Merengue, fandraisana anjara Dominikanina
1.3 Ny mambo sy ny fiaviany afrikanina
1.4 Ny cha-cha
1.5 Cumbia, lova afrikanina
1.6 Ny bachata
1.7 Dihy mahazatra hafa any amin'ny faritra Karaiba tsy dia malaza loatra
Dihy mahazatra any amin'ny faritr'i Karaiba: karazany maro be
Ny zavatra voalohany miavaka amin'ireo dihy ireo dia ny maro an'isa izay misy. Ohatra, ilay antsoina hoe mainty izy ireo, avy any amin'ny nosy Santa Lucia; ny puja Kolombiana, ny sextet na palenquero izy ireo na ny amponga kely, teraka tany Panama. Saingy, noho ny tsy fahafahan'ny fijanonana amin'ireo dihy rehetra ireo dia holazainay aminao ny momba ireo dihy malaza indrindra.
Salsa, dihy Karaiba quintessential
Salsa, dihy mahazatra an'ny faritra Karaiba par tsara indrindra
Mahaliana fa ny dihy Karaiba mahazatra indrindra nanjary nalaza tao New York tamin'ny taona enimpolo tamin'ny taonjato lasa. Tamin'io fotoana io no mpitendry mozika Puerto Rico notarihan'ny Dominikana Johnny pacheco nampalaza azy.
Saingy, ny fiaviany dia miverina any amin'ireo firenena Karaiba ary tena manokana mankany Kiobà. Raha ny marina, ny gadony sy ny gadony dia mifototra amin'ny mozika nentim-paharazana avy amin'io firenena io. Raha ny tena manokana dia avy amin'ny endriny ny gadona kiobàna izy ireo ary nalaina ny melodika Montuno izy ireo.
Kiobàna koa dia maro amin'ireo fitaovana ampiasainy. Ohatra, ny bongo, ny paila, ny güiro na ny omby izay ampian'ny hafa toy ny piano, trompetra ary ny baomba roa. Farany, ny firindrany dia avy amin'ny mozika eropeana.
Merengue, fandraisana anjara Dominikanina
Merengue no dihy malaza indrindra ao amin'ny Repoblika Dominikana. Tonga tamin'ny Etazonia taonjato lasa, fa ny niandohany dia nanomboka tamin'ny fahasivy ambin'ny folo ary tsy mazava. Be loatra ka maro ny angano momba izany.
Ny iray amin'ireo fanta-daza indrindra dia nilaza fa maherifo teratany teratany naratra tamin'ny tongony niady tamin'ny Espaniola. Rehefa niverina tany an-tanànany izy ireo dia nanapa-kevitra ny hanao fety ho azy ny mpiara-monina aminy. Ary satria hitan'izy ireo fa malemy izy, dia naleon'izy ireo nanahaka azy rehefa nandihy. Vokatr'izany dia notaritarihin'izy ireo ny tongony ary nafindrany ny valahany, endrika roa mampiavaka ny choreography meringue.
Na marina izany na tsia dia tantara mahafinaritra. Fa ny zava-misy dia ity dihy ity dia nanjary iray amin'ireo malaza indrindra eran'izao tontolo izao, hatramin'ny nanambarana azy Lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona nataon'i UNESCO.
Ny tena marina angamba dia ny fomban-drazana manondro ny niandohany tamin'ny tantsaha ao amin'ny faritra Ny Cibao fa hivarotra ny vokariny amin'ny tanàna izy ireo. Nijanona tao amin'ny trano fatoriana izy ireo ary ny iray tamin'izy ireo dia nantsoina hoe Perico Ripao. Teo no nampiala-voly ny tenany tamin'ny fampisehoana ity dihy ity. Noho izany dia nantsoina tamin'izany fotoana sy faritra izany indrindra Perico Ripao.
Mikasika ny mozikany kosa dia miorina amin'ny zavamaneno telo izy io: ny akordona, ny güira ary ny tambora. Ary farany, liana ihany koa ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanatsarana sy fivoaran'ny meringue no mpanao didy jadona Rafael Leonidas Trujillo, mpankafy rehetra an'io dia ireo izay namorona sekoly sy orkestra hampiroboroboana azy.
Ny mambo sy ny fiaviany afrikanina
Anisan'ireo dihy mahazatra any amin'ny faritr'i Karaiba, ity dia novolavolaina tany Kiobà. Saingy, ny fiaviany dia avy amin'ireo andevo afrikanina tonga tany amin'ny nosy. Na ahoana na ahoana, ny kinova maodin'ity dihy ity dia vokatry ny Orchestra Arcaño tamin'ny telopolo taonjato lasa.
Maka ny Cuba danzón, nampandeha azy ary nampiditra fampandrindrana ny feon-kira rehefa nanampy singa ny karazana montuno. Na izany aza, dia ilay Meksikana io Damaso Pérez Prado iza no hampalaza ny mambo erak'izao tontolo izao. Nanao izany izy tamin'ny fanitarana ny isan'ny mpilalao ao amin'ny orkestra ary nanampy singa jazz amerikana avaratra toy ny trompetra, saxophones, ary bass bass.
Ny toetra mampiavaka azy koa dia nahatonga ny mampiavaka azy hevitra mifanohitra izay nahatonga ny vatana hihetsika amin'ny kapoka. Efa tamin'ny dimampolo tamin'ny taonjato faha-XNUMX, mpitendry mozika maro no namindra ny mambo tany New York fanaovana azy ho tranga iraisam-pirenena marina.
Teraka koa ao KiobàNy fiandohany dia hita tsara amin'ny vokatry mambo. Nisy ireo mpandihy izay tsy nahazo aina tamin'ny gadona frenetic an'ny dihy nataon'i Pérez Prado. Ka nitady zavatra tony kokoa izy ireo ary izany no nahaterahany tao amin'ny cha-cha niaraka tamin'ny feony milamina sy gadona mahasarika.
Manokana, ny famoronana azy dia avy amin'ny mpamaky lokanga sy mpamoron-kira malaza Enrique Jorrín, izay nampiroborobo ihany koa ny maha-zava-dehibe ny tonon-kira notontosain'ny orkesitra iray manontolo na ny mpitendry fo irery.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia manambatra ny fakan'ny Cuba danzón ary ny azy Mambo, fa manova ny fiheviny melodika sy gadona. Ho fanampin'izany, mampiditra singa ao amin'ny schottische avy any Madrid. Mikasika ilay dihy ihany, dia voalaza fa noforonin'ilay vondrona izay nandoko azy tao amin'ny klioban'ny Silver Star tao Havana. Ny dian-tongony dia nanao feo tamin'ny tany izay toy ny daroka telo nifandimby. Ary nampiasa onomatopoeia, dia nataon'izy ireo batemy ilay karazana hoe "Cha Cha Cha".
Cumbia, lova afrikanina
Tsy toy ny teo aloha, ny cumbia dia heverina ho mpandova ny dihy afrikana izay nitondra tany Amerika ireo izay nentina ho andevo. Na izany aza, manana singa teratany sy espaniola koa izy io.
Na dia dihy eran'izao tontolo izao aza izy io ary misy resaka Arzantina, Shiliana, Meksikana ary koa ny Costa Rican cumbia, ny fiavian'ity dihy ity dia tsy maintsy hita any amin'ny faritanin'i Kolombia sy Panamà.
Vokatry ny synthesis izay noresahinay, ny amponga dia avy amin'ny afrikanina afrikanina, raha ny zavamaneno hafa kosa ny maracas, ny pitos ary ny gouache Teratany amerikanina izy ireo. Fa kosa, ny akanjo anaovan'ny mpandihy dia avy amin'ny karazana fitafiana espaniola fahizay.
Fa ny tena mahaliana antsika amin'ity lahatsoratra ity, izay dihy toa izany, dia manana fakany afrikana tena izy. Izy io dia mampiseho ny filan'ny nofo sy ny choreography mahazatra an'ireo dihy izay mbola hita ankehitriny ao am-pon'ny Africa.
Dihy tena izy koa io Dominikana fa nitatra tamin'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny taompolo enimpolo tamin'ny taonjato faharoa-polo avy tamin'ny rhythmic bolero, na dia manome fitaomana avy amin'i merengey ary ny kiobàna izy ireo.
Ho fanampin'izay, ho an'ny bachata dia soloina zavamaneno mahazatra an'ireo gadona ireo. Ohatra, ny maracas ny bolero dia nosoloina ny güira, koa an'ny fianakavian'ny vady, ary natolotra gitara.
Toy ny nitranga tamin'ny dihy maro hafa, ny bachata dia noheverina ho toy ny dihin'ny kilasy ambany indrindra. Avy eo dia fantatra amin'ny hoe "Mozika mangidy", izay niresaka momba ny alahelo naseho tamin'ny lohahevitr'izy ireo. Efa tamin'ny taona valopolo tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao niparitaka eran-tany ny karazany mandra-pahatongan'ny UNESCO nosokajina ho Lova tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona.
Etsy ankilany, nandritra ny tantarany, ny bachata dia nizara ho zana-tany roa. ny tecnoamargue dia iray tamin'izy ireo. Nampifangaroany ny mampiavaka an'ity dihy ity amin'ny mozika noforonina avy amin'ny fitaovana elektronika ary natambatra tamin'ny karazana hafa toa ny jazz na rock. Ny mpilalao mahay indrindra dia Sonia Silvestre.
Ny subgenre faharoa dia ilay antsoina hoe bachata mavokely, izay nanjary nalaza kokoa eran'izao tontolo izao. Ampy anay ny milaza aminao fa ny tarehimarika lehibe dia Victor Victor ary ambonin'izany rehetra izany, Juan Luis Guerra mba hahatsapanao azy. Amin'ity tranga ity dia ampiarahina amin'ny ballad tantaram-pitiavana.
Raha ny karazana ankehitriny, ny mpihira lehibe indrindra dia ilay Amerikanina mpihira fiaviana Dominikanina Romeo Santos, voalohany miaraka amin'ny vondrona misy anao, Aventura, ary ankehitriny irery.
Dihy mahazatra hafa any amin'ny faritra Karaiba tsy dia malaza loatra
Mpandika ny Mapalé
Ireo dihy izay notantarainay taminareo hatrizay dia mahazatra an'ny Karaiba, saingy nihoatra ny faritaniny izy ireo mba ho lasa malaza manerantany. Na izany aza, misy dihy hafa izay mbola tsy nahomby tany ivelany, fa malaza be any amin'ny faritr'i Karaiba.
Izany no tranga iraisana, izay niaviany dia mipetraka ao amin'ny faritanin'i Kolombia talohan'ny nahatongavan'ny Espaniola. Izy io dia manambatra ny fitaoman'ireo piper teratany miaraka amin'ny gadona afrikanina ary manana singa mamitaka mazava. Amin'izao fotoana izao dia dihy fandihizana izay manana gadona lilting sy fety. Mba handihizana izany dia mazàna maka izy ireo fitafiana kolombiana mahazatra. Anisan'ity karazana dihy ity koa ny Fandango, izay tsy misy ifandraisany amin'ny anarany espaniola. Avy amin'ny tanàna Boliviana an'ny siramamy, miparitaka haingana amin'ny Urabá Kolombiana. Izy io dia corrido mahafaly izay, mahaliana ny vehivavy, mitondra labozia handavana ny fitiavan'ireo lehilahy azy.
Ny fakany afrikana mazava kokoa dia manana ny mapalé. Amin'ity dihy ity dia ny amponga sy ny miantso no mamaritra ny gadona. Ny niandohany dia nifandraika tamin'ny asa, fa ankehitriny manana endrika fety tsy azo lavina izy io. Dihy mahery sy mavitrika io, feno exoticism.
Farany, holazainay aminao izany bullerengue. Toy ny dihy mahazatra any amin'ny faritr'i Karaiba, dia misy ny fandikana ny dihy, ny hira ary ny mozika. Ity farany dia amin'ny amponga sy amin'ny felatanana ihany no anaovana azy. Amin'ny lafiny iray, ny hira dia ataon'ny vehivavy foana ary ny dihy dia azon'ny mpivady sy vondrona anaovana azy.
Ho famaranana, efa nilaza taminay ny momba ny sasany amin'ireo dihy malaza any Karaiba izahay. Ireo voalohany noresahinay taminao dia nahatratra laza sy laza iraisam-pirenena. Ho azy ireo, ity farany dia fantatra ihany koa amin'ny faritany anaovan'izy ireo fampisehoana, saingy tsy dia kely loatra amin'ny ambin'izao tontolo izao. Na ahoana na ahoana, misy maro hafa dihy mahazatra an'ny faritra Karaiba. Anisan'izany, horesahintsika amin'ny fandalinana ny farotas, ny scrawl, nentin'ny Espaniola, na ny Ho lasa fantatro aho-fantatro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Dihy mahazatra an'ny faritra Karaiba